Ukuhlonipha i-Landmark animator: URichard Williams, obhubhile kwi-86 -I-NAB bonisa iiNdaba ngoSasazo lweBeat, Umsasazi osemthethweni we-NAB Show-NAB BONISA LULA
ikhaya » Okufumaneka » Ukuhlonipha i-Landmark animator: URichard Williams, ubhubhile kwi86
Ukuhlonipha i-Landmark animator: URichard Williams, ubhubhile kwi86
Kuza nosizi olukhulu ekwaziseni ukuba namhlanje iphawu lomhlaba elidumileyo URichard Williams usweleke eneminyaka eyi-86. U-Williams wayengumlingisi welizwi onesiphiwo, umbhali onesiphiwo, kunye nembali yobuntu eyaziwa kakhulu ngomsebenzi wayo. Uninzi lwegalelo likaWilliam elibonakalayo ekubonakalisweni kwezinto ezibandakanya iifilimu ezinje Uluhlu lwePinki yePinki, ukufaka inkqubela emtshatweni ngokuthandekayo nangokwenyani Abathengisi bakaPeter, Isela kunye noMbangi, eyalathisa ecaleni komnye imisebenzi esebenzayo. Nangona kunjalo, iyahamba ingatsho ukuba uRichard Williams akanakuthetha malunga naye okanye azukiswe engakhange akhankanye enye yezona zinto zibalulekileyo aziphumezileyo, kwaye ngumsebenzi wakhe lowo njengomlawuli opopayiyo ukuze enze isenzo esiphilayo / bhanyabhanya ophilayo Ngubani owakha uRabger Roger. Lo mboniso bhanyabhanya odlulileyo wawukhokelwe ngu I-Forrest Gump's URobert Zemeckis, kwaye yafumana iRichard Williams a Imbasa yeZiko leMfundo eliPhumeleleyo, kunye nee-oscars ezintathu ezikhuphisanayo eziphakathi kwezona zihlelweyo zesandi sokulungisa, ezona mpawu zibukekayo, kunye nokuhlelwa kwefilimu okuhle kakhulu.
Ngubani owakroba uRoger Umvundla Igalelo kuPhiliso
Kude kube namhlanje Ngubani owakha uRabger Roger ima luvavanyo lwexesha, hayi njengefilimu enkulu yomphenyi / yehlaya, kodwa kunye neetalente zetalente kaWilliams njenge animator. Kwabo bangaqhelekanga Ngubani owakha uRabger Roger, nangona ngoku kubonakala ngathi akulindelekanga, ifilim libali elinemifanekiso elixhokonxwa kwisiphumo se-LA, esidlalwe ngorhatya UBob Hoskins, osebenza kwaye aphande ukubulala ngaphakathi kweToonTown, iyintsomi los Angeles Uluntu apho abalinganiswa bekhathuni bebambisene nehlabathi lokwenyani kunye nabantu abahlala kulo, elisebenza kuphela ngokuqokelela umsebenzi omangalisayo kaWillies njengopopayi, kunye nokudalwa konke okufunekayo ukuzisa abalinganiswa bekhathuni ebomini ngaphandle kokulalanisa kumgangatho zoyilo okanye ukudityaniswa kwazo ngaphakathi kokuseta okwenziwayo. Ngubani owakha uRabger Roger ayisiyofilimu emnandi ukuyibukela kuphela xa ufuna ukubona ezinye zeekhathuni eziodidi oluphezulu, iDisney kunye neWarner Brothers ibandakanyiwe, zonke zidibene kwisakhelo esinye. Kukwangumzekelo okhethekileyo wendlela oopopayi abanokuvela ngayo, ukutshintsha, kunye nesiseko sokucela umngeni kwimida ngoku ebonakalisa ukuba ayinamda kumzobi kunye nobuchule njengoko uRichard Williams enqwenela.
Yintoni enokuFundwa ngaBanhanisi banamhlanje kuWilliam nakwilifa lakhe
Uopopayi sisicelo esinomdla kwifom yobugcisa bebhanyabhanya. Kwiminyaka edlulileyo, iinkampani ezifana Iipudiyo zoopopayi zePstrong kwaye DreamWorks Banike ezinye zezona zinto zibalulekileyo, ukuba ayizizo iinkqubo zedrafti ezinokuhanjiswa. Imisebenzi eyilwe ngobuchule njenge Shrek, Ukufumana iNemo, Kungfu Panda, yaye The Incredibles zikwazile ukugqitha kwaye zinyukele kwinqanaba elitsha lokufikisa. Bakwazile ukubandakanya ubuntu benkcubeko yemisebenzi emininzi yanamhlanje, nokuba yifilimu okanye enxulumene nomabonwakude, nokuba kukusilela okanye ukutolika kakubi. Oko akunakuthethwa malunga ne-animator enjengoRichard Williams, oya kukhunjulwa ngenxa yothando kunye negalelo lokwenza uphiliso, kunye nendalo ethathe ubuntu ethatha uninzi lwabalinganiswa bakhe abachazwe kumandla abo okuma baphile screen ukuya kwindawo apho oopopayi ababesemva kwabo baba lilizwi nomoya wabo. URichard uya kuphoswa ngokunzulu, kodwa angaze alibale, njengoko umzobi uninzi lweetalente ezinkulu ngoku ezisebenza ngoku oopopayi banokungathandabuzi ukuba ujonge njengentsika yokudala kunye nokubonakala okubonakalayo.
Ukuze ufunde ngakumbi ngale ntsomi inetalente enzulu, emva koko jonga: youtu.be/iWAwfXsYMrA
Iiposti zamva nje nguAndres Benetar (ndinibone nonke)
I-NAB bonisa iNqaku lePodcast leNew YorkUnveils kunye neZithuba zePodcast eziKhethekileyo - Septemba 11, 2019
Iinkonzo zeWebhu ze-Amazon Inc. Ziza kubonisa i-Cloud Workflows entsha yokuYila indalo kwi-IBC 2019 - Septemba 9, 2019
I-NewTek Ushers Evolution ye-Software-echaziweyo yokuBalisa amaBali kwi-IBC 2019 - Septemba 5, 2019
Mamela i-Aurora Health Campaign / i-Colonie oopopayi UBob Hoskins Ukusasazwa-iMedia Media Ukusasazwa kwezeNtlalo Igalelo Iphulo ukuhlela UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli ukudityaniswa PIXAR URichard Williams URobert Zemeckis SJGolden - Iintetho kunye nemisrya IColonie I-Colonie - Iindaba IKOLONIE / Chicago BuTeknoloji Ngubani owakha uRabger Roger	2019-08-17
Previous: Ukuveliswa kweVidiyo yeAdjunct-I-Spring 2015
next: Usasazo lweTekhnoloji yeVidiyo